घरमा भूलेर पनि नराख्नुहोस् यस्ता मूर्ति, नत्र हुनसक्छ अशुभ !!! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारघरमा भूलेर पनि नराख्नुहोस् यस्ता मूर्ति, नत्र हुनसक्छ अशुभ !!!
December 28, 2020 admin समाचार 1401
अन्तरजातीय बिहे गरेको ३ दिनमै बहिनीलाई काटेको ठाउमा पुग्दा… (हेर्नुस् भिडियोमा)
ग’र्भवती भएको ना’टक गरि प्रेमीसँग ५ लाख मा’गेको आमाले देखेपछि… (हेर्नुस् भिडियोमा)
आँचल शर्मा र नाजिर हुसेन अभिनित गीत ‘तोरी पेली तेल’को कभर भिडियो बनाउनेलाई पुरस्कार भिडियो हेर्नुहोस !
January 3, 2021 admin समाचार 954
अस्मिता अधिकारी र प्रनय क्याडीले गाएको गीत हो, ‘तोरी पेली तेल’ सार्वजनिक भएको छोटो समयमै चर्चामा आएको यो गीतमा दीपक शर्माको शब्द संगीत सुन्न सकिन्छ । अब यो गीतको कभर भिडियो बनाउनेलाई राम्रो अवसर छ
January 10, 2021 admin समाचार 6142
काठमाडौं । नेपाल एउटा हुर्कदैं गरेको अर्थतन्त्र हो । जसलाई बिकासोन्मूख देश भन्न पनि अलि गाह्रै पर्छ । त्यसैले यहाँ समृद्धि प्राप्त गर्न निकै गाह्रो र सजिलो दुवै छ ।सिर्जनशील सोच, दृष्टिकोण र आइडिया भए
November 19, 2020 admin समाचार 18565